कसरी बने बाहुनका छोरा चेपाङका बाबु ? छोडे श्रीमती र छोराहरु (भिडियोसहित) – दैनिक नेपाल न्युज
कसरी बने बाहुनका छोरा चेपाङका बाबु ? छोडे श्रीमती र छोराहरु (भिडियोसहित)
काठमाडौं । असाहय र सीमान्तकृत चेपाङ बालबालिकाका अभिभावक । केपी किरण शर्माको छोटो परिचय हो यो । चन्दा सहयोग उठाएर चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा गामबेशीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका केपी किरण शर्माको दैनिकी चेपाङ बालबालिका स्याहार्दैमा बित्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर पूर्व पत्रकार समेत रहेका शर्माले खोलेको केन्द्रमा हाल १६५ जना चेपाङ बालबालिका छन् । उनीहरु आवासिय सुविधा सहित नजिककैको विद्यालयमा पढ्छन् । चेपाङ बालबालिकाको अभिभाव क बन्ने सोच कसरी आयो त ? उनी भन्छन् ।
सात वर्षसम्म लेबरको रुपमा उनले युएईमा काम गरे । शर्माले साथीभाइसँग मिलेर दुवईमै नेपाली समाचार नाम पत्रिका निकाले । त्यहीबाट सुरु भएको थियो दिनदुःखीको लागि काम गर्ने उनको अभियान । नेपाल फर्किएर पनि उनले चेपाङकै बारेमा लेख्ने पत्रिका निकाले । चितवनको विकट क्षेत्र डुल्दै चेपाङ परिवारलाई सघाउन थाले । विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिए । तर, त्यसले प्रगति देखिएन ।
छात्रावृत्ति र सहयोग प्रभावकारी नदेखिएपछि उनले सिद्धि र काउलेको संगम चौकी भंज्याङ डाँडाबाट २५ जना बालबालिकालाई तल झारे । बिना योजना एकाएक थपिएको जिम्मेवारीलाई शर्माले कुशलताको पूर्वक निभाए । खोलेसिमलको एक विद्यालयमा राखेर उनीहरुलाई आफूसँग जे छ त्यही खुवाए खाए । २५ जना चेपाङ बालबालिकाकाको लालनपालन त्यतिबेला कठीन थियो उनलाई । त्यसैले उनले सहयोग उठाउने निधो गरे । बोरा बोकेर खोलेसिमल बजार डुलेको र मानिसहरुले साथ दिएको सम्झिँदा हिजो जस्तै लाग्छ उनलाई ।
त्यसो त शर्मालाई सहयोग उठाएर अपचलन गर्न लाग्यो भन्ने खालका आक्षेप पनि लागे । तर, ति सबैलाई वेवास्ता गर्दै आफैंले उठाएएको जिम्मेवारी बहन गर्दै गए उनले । उनले ल्याउँदा अक्षर समेत नचिन्ने बालबालिका अहिले कक्षा ९ मा पढ्ने भइसकेका छन् । केही फरक क्षमता भएका त सिभिल इञ्जिनियर पढ्ने भइसके । चेपाङ बालबालिकाको दायित्व लिनुअघि नै शर्माले परिवारलाई सम्झाई सकेका थिए । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिले उनले घर व्यवस्थापन गरिसकेका थिए । दुई छोराको सम्पूर्ण दायित्व पनि श्रीमतीलाई सुम्पेर चेपाङ बालबालिकाको सेवामा लागेको उनी बताउँछन् । चेपाङ वस्ती डुलेर पारिवारिक अवस्था आँकलन कमजोर आर्थिक अवस्था रहेकाहरुलाई सघाउँदै आएका छन् शर्माले ।
खानाको समेत धौ धौ हुने अवस्थामा रहेका परिवारका बालबालिकालाई ल्याएर उनले शिक्षा दिक्षा दिइरहेका छन् । सीमान्तकृत चेपाङ समुदाय अझै पनि छायाँमा छन् । विकट पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यो समुदायको जीवनस्तर उकास्न औपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण हुने शर्माको ठम्माइ छ । केन्द्रमा बसेर उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि चेपाङ बालबालिका सजिलै समाजमा स्थापित हुने उनी बताउँछन् । केन्द्रको आन्तरिक वातावरण पनि रमाइलो छ । उमेरले जेठा दाइदिदीहरुले मिलेर पालैपालै खाना बनाउँछन् सरसफाइ गर्छन् । साना कक्षाका बालबालिकालाई ठूला कक्षाका विद्यार्थीले पढ्नमा सघाउँछन् । यसले बालबालिकालाई व्यवहारिक बनाउने उनको बुझाइ छ । केन्द्रका बालबालिकाहरु अनुशासित त छन् नै विद्यालयमा समेत पुरस्कृत हुने गरेका छन् ।
पहिले सडक, टोलमा माग्दै खाद्यान्न संकलन गर्दै आएका केपी किरण शर्माले पछिल्लो समय प्रविधिको उपयोग गर्न थालेका छन् । सहयोगको भरमा चल्दै आएको केन्द्रका लागि शर्माले सकेसम्म खाद्यान्न र लत्ताकपडा नै दिन आग्रह गर्छन् । ५२ रुपैयाँबाट शुरु भएको चेपाङ बालबालिका पढाउने अभियान अहिले करोडौंमा चलिरहेको छ । भौतिक संरचना मात्रै तीन करोड भन्दा बढीको बनेका छन् । केपी किरण शर्माले सुरु गरेको अभियानमा अहिले धेरैको साथ छ । सबैले सहयोग गरेकै कारण अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेको केपी किरण बताउँछन् । जीवनको ५०औं वसन्त पार गरिसकेका केपी किरण शर्मालाई अझै केही वर्ष सक्रिय भएर काम गर्न मन छ । त्यसपछि यो पुण्य कार्यको नेतृत्व कसैलाई सुम्पिने योजना छ उनको ।
प्रदेश नं ५ नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउने अभियानमा
नेपाल आइडलको सिजन थ्रीको अडिसनका लागि आएका सहभागी
अबदेखि चालक अनुमतिपत्रको कार्ड डेढ महिनाभित्र आइपुग्ने
काठमाडौँ, २५ असोज: लामो समयदेखि प्राविधिक समस्याका कारण रोकिएको चालक अनुमतिपत्रको कार्ड एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा आइपुग्ने भएको छ । लामो समयसम्म छपाई उपकरण (मास प्रिन्टर)मा कार्ड नमिलेकाले कार्ड आउन सकेको [...]
पटिहानीतर्फ जाँदै गरेको बसको ठक्करबाट बालकको मृत्यु
चितवन, २४ असोज: भरतपुर महानगरपालिका–७ विकास चोकमा बसको ठक्कबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । चौबिसकोठीबाट पटिहानीतर्फ जाँदै गरेको नबा १ प १२८४ नम्बरको बसले स्थानीय पैदलयात्री आठ वर्षका बालकलाई [...]
कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल र उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच भेटवार्ता, के विषयमा भयो छलफल ?
काठमाडौँ, २३ असोजः भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल र भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ । उत्तरप्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको कार्यालयमा आज भएको भेटमा नेपाल–भारत [...]
गण्डकी, २२ असोजः आध्यात्मिक, जैविक, आर्थिक र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको कालीगण्डकी नदीमा पाइने विश्वकै बहुमूल्य शिला शालिग्राम अवैधरुपमा गरिएको व्यापक नदी दोहनका कारण गिटीमा परिणत हुँदै गएको छ [...]
म्याग्दी, २२ असोजः उत्तर/दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको चार वटा खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका जोड्ने यस आयोजनाको [...]
आठयुवाद्वारा मर्दी हिमालको एकैसाथ सफल आरोहण
कास्की, २२ असोजः कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–१ का आठ युवाले पाँच हजार ५८७ मिटरको मर्दी हिमाल एकैसाथ सफल आरोहण गरेका छन् । पछिल्लो समय स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा परेको सो [...]